Xagee ku dambeyn doontaa sadex-geesoodka Af-Mandiila.
Oct 19, 2011 - jawaab	Number of View: 445Share
Nairobi (S. News Network) Qormadan oo ay ku xigi doonaan qormooyin kale waxaanu ku faaqidi doonaa loolanka adag ee loogu jiro xukunka magaalada dekeda leh ee Af-Mandiila, bulshadu iyadaa sharaxaad ka baxsan doonta magacyada aanu u adeegsan doono sadexda nin ee ku loolamaya magaaladaas iyo saaxiibada ay wataan.
Magacyada ragaas aanu siindoono waxay kala yihiin Guul-wade, Miigane iyo Warmooge. Laakiin sadexdaas nin laba kamid ah waxaa gadaal ka taagan laba nin oo kale oo Af-Mandiila maamulkeeda isku haya.
Miigane wuxuu haystaa fursad uu waligiis ku taami jiray inuu xoog iyo xeelad u helo siduu maamulka Af-Mandiila ku heli lahaa wuxuuna sitaa nin firfircoon oo la yiraahdo Bootoole. Ninkan lagu magacaabo Bootoole dhulka Somalia waligii ma imaan waxaana haatan hamigiisu yahay siduu wax uga heli lahaa dhulkan aani cidi u maqnayn oo qoloba meel qabsanayso.
Guul-wade isagu mar-dhow ayuu baraarugay oo hurdo uu ku jiray ayuu ka kacay, wuxuuna hadda ogaaday in xaaladu waji kale leedahay wuxuuna rabaa inuu boorka iska jafo, waxaa ka agdhow oo dhegaha wax ugu sheegaya nin lagu magacaabo Bulbul-raamoole.
Bulbul-Raamoole hadda kahor Somalia wuu yimid wuxuuna ku waayay caruur badan oo uu dhalay wuxuuna kala kulmay waji xumo, hadase waa quryar socod wuxuuna rabaa inuu saaxiibkii Guul-Wade howlihiisa ku fushado.
War-Mooge isagu cidina lama socdo wuxuu haatan u egyahay nin markhaati oo kale ah hada kahor buu isku dayay inuu sida Miigane oo kale fursad u helo, way soo martay laakiin maamul xumadiisii ayaa meel xun ka tuurtay, wuxuu waagaas watay oo saaxiib fiican la ahaa Bulbul-Raamoole.
Bulbul-Raamoole saaxiibkii Guul-Wade ayuu wax u sheegay oo yiri “War Guul-wade Af-Mandiila duulaan baa lagu yahaye ee hurdada ka kac”. Miigane isagu horey ayuu u tashaday oo hurdo iyo isaga beri horee-horee ayaa isugu dambeysay .
Waxaa kaloo meesha ku jira nin la dhoho Gari-Magasho oo haatan Af-Mandiila ka taliya oo qolo walibana ay rabto inay ka xorayso waxaana lawada sitaa hadda magac guud oo la dhoho Ujeedo-Xun.
Ujeedo Xun waa lagu dagaal galayaa hadeer laakiin hadhow qof walba wuxuu rabaa inuu iyada kusii gambado hadii dambi cidi yeelanayso siloo yiraahdo wuxuu kasoo horjeestay maamulka Ujeedo-Xun.
War-mooge haatan waa quryar socod qolo walibana lugta ayuu kula jiraa, wuxuu rabaa ciddii u harta sheekadan sadex-geesoodka ah inuu rootiga kula daarto oo maamulka magaalada Af-Mandiila wax ku yeesho isagoo xirfad iyo xeelad dabacsan isticmaalaya.
La soco qaybta soo socota oo Bulbul-Raamoole iyo Bootoole waxay isku afgaran la’yihiin ku saabsan.
Maxamed Jaamac Faarax-Barre. Sooyaal News Network.